Dating uye Ukama Advice - Ungashandisa mutemo Ngozi Kuwana Rudo Rwechokwadi?
Saka chii chiri Mutemo Ngozi? Zvichitaurwa zviri nyore ndiko Mutemo Universal rinoti tichava kukwezva muupenyu hwedu zvinhu pfungwa dzedu pane, ingava zvakanaka kana akaipa. Ungave vanoziva kana kuti kwete, ose akafunga une, ose manzwiro aunoita, zvose zvaunonzwa uye kuverenga, inokanganisa chokwadi chenyu.
Saka chii chinoita kuti zvine chokuita nomumwe munhu uye ukama?
By zvechokwadi kunzwisisa zvaunoda kubva ukama uye kushandisa zvimwe zvinokosha chaizvo Mutemo Attraction dzemitemo, uchava nechokwadi chokuti unokwanisa zvamunoda zvechokwadi. Zvakakosha kunzwisisa chaizvo zvinooneka unhu, maitiro, tsika, zvinotendwa, uye zvavanofarira zvinokosha kwauri kuitira kuti unogona kufunga zvaunoda muukama hwako pane zvaunoda haudi.
yeuka, uchawana zvaunofanira kufunga.
Nguva zhinji, vanhu vachabva imwe vakakundikana ukama mumwe pasina kupa chero pfungwa zvose kuti nei kana kuti ukama hwavo vanoramba kukundikana. Zviri nane, Ivo pamusoro akarurama uye vanoguma vava mumwe ukama kuti anooma zvakafanana, asi zvakashandurwa zvakanyanyisa zvikonzero.
“Kana uri wakafanana ndakanga, hauna pfungwa zvinongoratidza kuda
kubva kwenyu ukama rinotevera Ñ chete zvinofanira kuva zvakasiyana zvachose
wokupedzisira uya vakakundikana zvinosiririsa!”
Ini zvirokwazvo aiziva ndaisada Ñ kanenge kubva ukama kuti ichangopera. Hazvingavi kunge zvikuru kana ndingadai kutora nguva yokufunga nezvazvo vose vakatadza ukama uye zvakabatanidzwa zvose kuti marwadzo kupinda imwe pfungwa zvakajeka zvandakaita uye ndisingadi muukama? Ndingadai ndakaponesa pachangu ndiri kufara mashoma zvakavamba kuchinja.
Ndinoita sei 'kwezva’ ukama wakakwana kwandiri?
Ndava kukuratidzai chaiyo nokukurumidza uye nyore nzira kukwezva chaiyo munhu kuti uri kutsvaka – Your kurota dating!
Atore kapepa uye nyora pasi zvose zvamunoda yenyu ukama yakakwana. Chii iye kana iye kufanana? Sei vanotarira, munhuhwi, taura? Ndezvipi zvinhu uchaita pamwe? Unonzwa sei kana wava vakavapoteredza? Chaizvoizvo kupinda ichi uye tora nguva kunyora zvose. Zvichava zviripo pakupedzisira.
Vanhu vakawanda havamboendi kutora danho iri kunyora pasi zvavanoda asi ndiwo chete danho rinokosha kupfuura kuwana shamwari yamaroto avo.
“Unoziva kuti nokungomaka kunyora pasi zvaunoda, iwe uwedzere mikana yako kuwana parutivi 80%!”
Chimbofunga kuti kweminiti…
Regai kupokana pachako. Zvokufungidzira kuti imi muri akakwana munzira dzose uye hapana amire munzira dzako kuwana chaizvo zvaunoda. kwete mari, kana nezviso, kana nguva, kana chinhu chipi nechipi.
“ImagineÖ Unogona kuva chero zvaunoda!”
Kana wapedza pachiitwa ichi, iwe uchava zvakanaka mberi mutambo. Torai chero unofanira… Uyu ndiwo musimboti wako azotipa kubudirira!
Iva zvakajeka mupfungwa dzako pamusoro zvaunoda. zvimwe, Zvose havazovi pfungwa chii uchida N ndizvo zvazvinofanira achakupa. (Just kukurumidza kucherechedza, kana ini ndikati 'Universe', Ndinoreva Mwari, Buddha, Mother Earth, kana chero izwi imi kushandisa inoshanda simba renyu yepamusorosoro.)
kuvhiringidzika? Gara neni hereÖ Fungidzira kuenda kuresitorendi uye yairayira ane hampurilainen. The hweta anotendeuka hodha yako. hampurilainen yako pamberi anosvika, iwe changed hurongwa yako. Zvino iwe uti hweta kuti unoda zvechokwadi munhu Steak. The hweta anotendeuka hodha yako. Steak yako pamberi anosvika, ukaudza hweta kuti iwe Makachinja pfungwa dzako zvakare uye angada saradhi. Zvino panguva iyi, Mahweta vakawanda kukuudza kuti saradhi pachako. The Universe haazoiti ichi, asi unogona kuona sei zvakaoma chaizvo kuti Universe kukupa chaizvo zvaunoda kana usingakwani kunyange kuziva?
OK Ñ apedza?
Kana hamuna kuzviita Ñ kudzokera kuzviita. Ini ndikati kuti izvi zvaizova nyore, asi iwe uchiri kuita zvishoma basa.
Zvino kuti uri zvakajeka nezvauri chaizvo ari shamwari, tora kuti bepa, peta nayo uye kuutakura nemi kweinenge vhiki. Kuutakura muhomwe yako, muna chikwama chako kana chikwama, kana andapeni yako. Hazvina basa apo iwe ndokuisa, chero vanorichengeta nemi kweinenge vhiki. Pose iwe yeuka kuti une chidimbu ichi nepepa nemi, rangarirai manzwiro chii chichakurukurwa vanoda kuva nomumwe wenyu. Chaizvoizvo kuzvinzwa!
Pane imwe danho kukosha chaizvo. Muvhiki rino, nechokwadi chokuti uchiteerera dumbu rako, kana inzwi romukati. Kana akakuudza kuti kumisa panguva Dry Cleaners musi weChipiri kana iwe anowanzoita kuenda neChina, rambai Chipiri! Unogona kusangana nemi mweya naye vakamira kwako mumutsara. The apa ndechekuti waita akaisa kurongeka kwenyu pamwe Universe, zvino unofanira kuteerera zviratidzo vari kutumirwa nzira yako uye kusazviteerera!